Xeerarka Shirarka - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Axdiga Wax-barashada Sumcadda wax-yeeleynu mana takoori doono asalka jinsi, midab, diin (caqiido), jinsi, muujinta jinsi, da ', asal wadan (isir), naafo, guur, xaalad jinsi, ama xaalad milatari, mid kastoo kamid ah hawlaheeda ama hawlaheeda. Hawlahan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, shaqaalaynta iyo cayrinta shaqaalaha, xulashada mutadawiciin iyo iibiyayaal, iyo bixinta adeegyo. Waxaa naga go'an inaan siino jawi loo dhan yahay oo soo dhaweyn leh dhammaan xubnaha shaqaalaheena, ardayda, waalidiinta, iyo tabaruceyaasha. Fadlan u hagaaji dhammaan weydiimaha agaasimaha Iskuulka Charter.
Ogeysiiskaan qarsoodiga ah wuxuu siidaayaa dhaqannada asturnaanta ee Summearningcharter.org. Ogeysiiskaan qarsoodiga ah wuxuu quseeyaa keliya macluumaadka uu soo aruuriyay degelkan. Waxay kugu soo ogaysiin doontaa waxyaabaha soo socda:
Waxa macluumaadka shaqsiga lagu garan karo laga soo qaado adiga adiga oo ka maraya websaydhka, sida loo istcimaalo iyo cidda lala wadaagi karo.
Sidee baad u saxno wixii qalad ah ee macluumaadka.
Waxaan u adeegsan doonnaa macluumaadkaaga si aan kaaga jawaabno, la xiriirta sababta aad nala soo xiriirtay. Macluumaadkaaga la wadaagi mayno dhinac saddexaad oo ka baxsan ururkeena.
Ilaa aad naga codsato inaanaan ahayn, waxaan kugula soo xiriiri karnaa e-mayl mustaqbalka si aan kuugu sheegno wixii ku saabsan cusbooneysiinta, wararka, dhacdooyinka, ama isbeddelada siyaasaddan qarsoodiga ah.
Waad ka bixi kartaa wixii xiriir mustaqbal ah annaga ah waqti kasta. Waad sameyn kartaa waxyaabaha soo socda waqti kasto adoo nagala soo xiriiraya cinwaanka emaylka ama nambarada taleefanada ee kuqoran websaydhka:
U sheeg wixii walaac ah ee aad ka qabto isticmaalka xogtaada.
Waxaan u adeegsanaa 256 bit SSL encryption dhammaan shabakadeena. Waxaad ku xaqiijin kartaa tan adoo raadinaya astaanta qufulka ee cinwaanka cinwaanka iyo raadinta "https" bilowga cinwaanka bogga Websaydhka.
In kasta oo aan u isticmaalno siro si aan u ilaalino macluumaadka xasaasiga ah ee la isugu gudbiyo khadka tooska ah, waxaan kaloo ilaalinaa macluumaadkaaga khadka tooska ah. Kaliya shaqaalaha u baahan macluumaadka si ay u qabtaan shaqo gaar ah (tusaale ahaan, qaansheegad ama adeegga macaamiisha) ayaa loo oggolaaday inay galaan macluumaadka shaqsiga lagu garan karo. Kombiyuutarada / kombuyuutarrada aan ku keydinno macluumaadka shaqsi lagu garan karo waxaa lagu hayaa deegaan aamin ah.
Waxaan u isticmaalnaa "cookies" boggan. Cookie waa gabal yar oo xog ah oo ku kaydsan dariiqa booqdaha goobta si ay nooga caawiso inaan kor u qaadno marin u helka bartayada iyo aqoonsiga soo noqnoqda booqdayaasha boggeena. Kukiyada ayaa sidoo kale awood noo siin kara inaan raad-raacno oo beegsanno danaha isticmaalayaashayada si aan kor ugu qaadno waayo-aragnimada bartayada. Adeegsiga cookie sinnaba uguma xirna wax macluumaad ah oo shaqsi ahaan lagu garan karo oo ku saabsan bartayada.
Degelkan waxaa ku jira xiriiriyeyaal bogag kale. Fadlan la soco in anagu masuul ka ahayn waxyaabaha ku jira ama dhaqannada asturnaanta ee goobahan kale. Waxaan ku dhiirigelineynaa isticmaalayaasheena inay la socdaan marka ay ka baxaan bartayada oo ay akhriyaan qoraalada gaarka ah ee bog kasta oo soo aruuriya macluumaadka shaqsiga lagu garan karo.